Uhambo lokuqala loLondolozo lwembali - 1aviagem.com
Tshintsha: uhambo lokuqala
Yintoni ekufuneka uyenze eRiga IsiXeko esidibanisa izakhiwo ezintsha kunye nezakudala- iLatvia
Ewe, ngaphambi kokuba ndithethe ngeRiga ngokwayo, kutheni ndaphelela apho? Kumnqweno wokundwendwela onke amazwe ehlabathi, okanye uninzi lwawo, iLatvia yayiphakathi kwendlela, kwaye embindini wendlela yayinguLatvia. Phakathi kwe-Estonia neLithuania.😎 Into endothusayo kukuma…
Funda ngokugqithisileyo Yintoni ekufuneka uyenze eRiga IsiXeko esidibanisa izakhiwo ezintsha kunye nezakudala- iLatvia
Belarus kummi waseBelarusian
Sawubona wonke umntu, ngoko makhe sikhulume ngeBelarus namhlanje. Ukwenza oku, akukho nto ingcono kunokuba udliwano-ndlebe nommi waseBelarusian. Kwaye xa ndenza lo dliwano ndlebe nomhlobo wam othandekayo Kate. Sadibana xa ndenza uhambo lokuqala apho. Wayetyelele uMinsk kwaye wayeyisikhokelo sendawo ...
Funda ngokugqithisileyo Belarus kummi waseBelarusian
Uhambo lokuqala ukuya eUnited States - eNew York.
Ngoko, sithetha njani nge-United States namhlanje? Ilizwe elivela kuyo amanethiwekhi amaninzi eentlalo ezifana ne-facebook, instagram, twitter kunye neyokugqibela umongameli wangoku wenza iingxelo eziphikisanayo! Kodwa kulungile ukuba sikhumbule ukuba leli lizwe libuye liboniswe ngokuphindaphindiweyo ekulwa nokulwa nobuhlanga, njengoMartin Luther King ...
Funda ngokugqithisileyo Uhambo lokuqala ukuya eUnited States - eNew York.
EPeru malunga nombono wasePeruvia kunye nombono wezokhenketho
Kukuneliseka kakhulu ukuba ndipapashe eli thumela kuwe. Ndicinga ukuba yiyona nto ibhetele kwiBlogi kude kube ngoku. Ngokukodwa! Ngokokuqala ngqa, 1aviagem.com, sifumana iphuzu lokujonga ilizwe ngokubhekiselele kwindalo, kunye nakubonkethi. Ukwenza kube lula kunoma ubani ofunda ukwazi othethayo ...
Funda ngokugqithisileyo EPeru malunga nombono wasePeruvia kunye nombono wezokhenketho
Ngenxa yegama 1aviagem?
Ewe, eli gama laphunyezwa xa ndiqalise ishaneli kwi-youtube. Kwakumfuneko ukufumana igama elikhethekileyo. Isiteshi (kwaye ngoku ibhulogi nayo) yayiza kuthetha ngokuhamba. Andiqhele ukuphinda uhambo, ndiyenze xa kunokwenzeka kumazwe amatsha okanye kwiindawo ezintsha. Ngoko ke, ukuba utshintshe indawo oya kuyo kwaye uhambe kwindawo eyahlukileyo, ...
Funda ngokugqithisileyo Ngenxa yegama 1aviagem?
EBrazil, iingcebiso malunga neRio de Janeiro
Ukuqwalasela ukubuya kweqela laseBrazil ekhaya, njani malunga nolwazi oluncinane lwaseBrazil? Ngoko ke namhlanje siya kuyazi isixeko emangalisayo, ikomkhulu owayesakuba Brazil, ilizwe Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho (lo Paulista!, Enkosi umfundi uncedo, Renato RRSP) kunye nabanye abaninzi. Kuphi uMichael Jackson, uYakobi ...
Funda ngokugqithisileyo EBrazil, iingcebiso malunga neRio de Janeiro
Kuthiwani ngeColombia, yintoni esinokuyithemba kuyo?
Kwaye lwalunjani uhambo lwethu lokuqala lokuya eColombia? Sithembela kuwe ngeengcebiso, ngezinto ezilandelwayo kunye nembali! Siye eCarlaingena ukuya kukhangela okuncinci malunga nelizwe. Landela nathi. Yintoni igqirha? ICiudad Amurallada (isiXeko sase-Walled okanye isiXeko se-Walled) kunye neziko lembali - ndicebisa ukwenza indawo yokuma ngezinyawo ezitratweni incinci, ngokuba…
Funda ngokugqithisileyo Kuthiwani ngeColombia, yintoni esinokuyithemba kuyo?
ESingapore - malunga nemiboniso kunye ne-Marina Bay Sands
Kwaye andinakuqala le post ngaphandle kokubulela kuqala othanda ividiyo kwaye ubhalisele kwisiteshi se-Youtube 1aviagem, kwaye wanikela oko. Ixesha lokuzisa iSingapore okanye iSingapore kwisiza. Ngoko ndibhalela ukubonga kwam kubo bonke abanikele inkxaso kule projekthi ukususela kwisiteshi ...
Funda ngokugqithisileyo ESingapore - malunga nemiboniso kunye ne-Marina Bay Sands
I-Parachute Jump Yintoni efana nayo?
Xhuma ngeparachute, kunjani? Ngaphambi kokuba ndixelele, ndiyabuza: Ngaba wakhe wafuna ukubhabha njengokhozi? okanye enye intaka? Ngaba ukhe waziva "unomona" ngezi zinto zinokubhabha? Ukuba impendulo ilungile kuyo nayiphi na kule mibuzo ke amava ngowakho. Well, kutheni umfana weparachute?…
Funda ngokugqithisileyo I-Parachute Jump Yintoni efana nayo?
Cambodia: Iingcebiso, iItempile, iIbali kunye neemilinganiselo
Kwaye kwakuyisihlandlo sokutyelela eCambodia, eli lizwe elilula, elisebenzayo, elinomdla. Ukususela ekuqaleni ilizwe liye laphumelela kum innovation kunye nokusebenza kakuhle! Yintoni? Kodwa iCambodia ayilona lihlwempu, lizwe lingakhuselekanga? Landela uze ubone ukuba ekugqibeleni uya kugcina umbono omnye. Iingcebiso: Innovation: Cambodia, ...
Funda ngokugqithisileyo Cambodia: Iingcebiso, iItempile, iIbali kunye neemilinganiselo
Yintoni endifanele ndiyazi ngaphambi kokuya eRashiya? (Iingcebiso)
Ukwenza uhambo olunokuthula lwaseRussia ugcine engqondweni: 1- Ukuba ungumBrazil ngoko awuyidingi i-visa, nje ipaspoti. I-2- Imali yaseRashiya yiRuble, ehlaziywa ngokubhekiselele kwiNyathelo. Okwangoku, i-1 Real ixabisa malunga neeRubles ze-18. 3- Ukuthetha ngemali, imali kwiATM iyakwazi ...
Funda ngokugqithisileyo Yintoni endifanele ndiyazi ngaphambi kokuya eRashiya? (Iingcebiso)